Mootummaan Masrii gamtaa Afriikaas ta’e lammiiwwan Afriikaaf kabajaas ta’e amantaa akka irraa hin qabaanne ministriin dhimma alaa fi ambaasaadderoota Afriikaaf beeksisuun isaa ibsamee jira. Dhimma laga Afriikaa dhimma Arabaa gochuun illee waan hin taanee dha jechuu dhaan dubbi himaan ministrichaa beeksisanii jiran.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee ripaablikii dimoktaatawaa koongoo keessatti kan geggeessame mariin biyyoota sadanii bu’aa utuu hin argamsiisiin xumuramuuf sababaan, biyyoota gara gadii lafa lagi sun itti yaa’u irra jiran ta’uu, ministeroonni dhimma alaa kan humna ibsaa fi bishaanii Itiyoopiyaa Finfinneetti kan argaman ambaasaadderoota biyyootii Afriikaaf ibsuu isaanii dubbi himaan ministrii dhimma alaa ambaasaadder Diinaa Muftii dubbatanii jiran.
Dubbi himaan kun akka jedhanitti Itiyoopiyaan gara Kinshaasaatti kan imalteef hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii biyyoonni sadan geggeessan tokkummaa hafruura Afriikaan rakkoo Afriikaa Afriikaa dhumaan hiikuun ni danda’ama abdii jedhuun ture.
Haa ta’u malee qaama ka biroo dhaan dhimma Afriikaa kana Afriikaa keessaa baasuuf, jiddu seeninsi Afriikaas akka hin milkoofne dhiibbaa kan godhe ture jechuun ambaasaadder Diinaan hubachiisaniiru. Ambaasaadderichi kallattii dhaan maqaa dha’uu baatanis, ibsa kennanii irraa kanaaf adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa Masrii ta’uu tilmaamuun ni danda’ama.
Kafaa, Shakkaa, Daawroo, Beenchi Shakkoo, Omoo Lixaa fi Aanaalee Addaa Kontaa Waxabajji Dhufu Filannoo Hiree Murteeffannaa Geggeessan
Kaayyoo Afgaanistaan Keessaa Qabnu Fixaan Baafnee Jirra: Antonii Bliinkan
Iraan Tarkaanfii Fudhattu Beeksisaa Jirti
Minisootaa Keessatti Ajjeechaan Dhaqqabee Polisii Waliin Walittibu'iisa Hordoofsisee Jira
Atileetonni Itiyoophiyaa Magaalota Awurooppatti Milkaa’aniiru
Turtii - Hudeessituu Dhaabbata Numaan Wajjin